Moving Towards Federalism and Peace in Myanmar
In line with the idea of federalism to “share power and responsibility”, the Centre for Development and Ethnic Studies (CDES) decided to take responsibility for... read more →
KNU ဒုဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
‘‘ဒီခွဲမထွက်ရေးဆိုတာက အခြေခံမူမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးသဘာတူညီချက်ဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံရေးကတိက၀တ်အဖြစ် ဒါက သီးသန့်ဆွေးနွေးပြီးတော့ လုပ်ရမယ့် ကိစ္စဖြစ်တယ်’’
၂၁ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်း အဝေးသို့ တက်ရောက်လာသည့် NCA လက်မှတ်ထိုး ကရင်အမျိုး သားအစည်းအရုံး (KNU) အဖွဲ့မှ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းအား 7Day Daily က တွေ့ဆုံမေးမြန်း ထားသည်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါ သည်။
KNU အနေနဲ့ ဒီပွဲအပေါ်မှာအမြင့် ဆုံး ဘာတွေမျှော်လင့်ထားလဲ။
ကျွန်တော်တို မျှော်လင့်တာ ကတော့ အဓိကကျတဲ့ ဖက်ဒရယ် အခြေခံမူတွေပေါ့။ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ နောက်ပြီး ရလာတဲ့ အချက်တွေက အတွေ့ အကြုံရဖို့။ ဘယ်တိုက်ပွဲမဆို အောင်မြင်တယ်၊ အကျိုးအမြတ် အများကြီး ရတယ်ဆိုတာ တိုက်ပွဲ တိုင်းမှာ မရှိဘူး။ သို့သော်လည်းပဲ ဆက်ပြီး လုပ်နိုင်တဲ့ အနေအထား တစ်ခုကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ရ မယ်။ ဒီအချက်အပေါ်မှာ ရှေ့ ဆက်ပြီးတော့ ပိုမိုပြီးကောင်းမွန် တဲ့ သဘောတူညီချက်ရဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်တယ်။ ယုံ ကြည်မှု တည်ဆောက်တာလည်း ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ငြိမ်း ချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ရှေ့ဆက် သွားနေတဲ့အနေအထားတစ်ခု ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်နိုင် တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။
မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေလည်း ဒီ ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ သူတို့ အနေနဲ့ ဒီလိုလာနိုင်ခြင်းအားဖြင့် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ၊ ငြိမ်းချမ်း ရေးအတွက် ဘယ်လိုမျှော်လင့် သလဲ။
(၁)အချက်က သူတို့မူလ ကငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ဒီ NCA မှာ လက်မှတ်မထိုးပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်း ရေးညီလာခံတက်တယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ် ငန်းစဉ်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ပဲ။ ဒါကို တက်ခြင်းအားဖြင့် ရှေ့ဆက်ပြီး တော့ ပိုမိုပြီးတော့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် အနေအထား တစ်ခု၊ လမ်းစတစ်ခုကို ရနိုင်မယ် လို့မြင်တယ်။
သူတို့အနေနဲ့ ဒီကိုလာတဲ့ အချိန် မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ ဘာတွေ ဆက်လုပ်သင့်တယ်လို့ အကြံပေးလိုလဲ။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ငြိမ်း ချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာ အား လုံးက ဒီNCA မှာငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းစဉ်ပေါ့နော်၊ အဲဒီလိုလုပ်တဲ့ နေရာမှာ ပိုမိုပြီးတော့ပါဝင်လာ ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့တိုင်း ရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ တိုင်း ရင်းသား လိုလားချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီး ပြောဆို ခြင်းအားဖြင့် ပိုပြီးအားကောင်း လာမယ်လို့မြင်ပါတယ်။
အစိုးရ၊ တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်း သားအဖွဲ့တွေကြားမှာ ယုံကြည် မှုအခြေအနေက တော်တော်အား နည်းနေဆဲဆိုတာမျိုးတွေ ပြော နေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါဘာကြောင့် ဖြစ်ရတယ်လို့ မြင် ပါသလဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖြတ်သန်း တဲ့အတွေ့အကြုံဆောင်ရွက်မှုအ ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကသဲသဲမဲမဲ တစ်ဖက် နဲ့တစ်ဖက်က အပြုတ်တိုက်ဖုိ့ဆို တဲ့ ရန်သူလို သဘောထားခဲ့တယ်။ အခုမှစပြီးတော့ ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်တာလေးငါးနှစ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ အပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုအပြည့်အ၀ တော့မရှိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ယုံ ကြည်မှုမရှိတာက လုပ်ငန်းအပေါ် မှာပဲ ဖန်တီးရမယ်။ ဖော်ဆောင်ရ မယ်။ နောက်ပြီးတော့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုကလည်း တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် သဘောထားရှိခြင်းအား ဖြင့် ပိုမိုပြီးတော့ နားလည်မှုရှိလာ မယ်၊ ယုံကြည်မှုရှိလာမယ်၊ ယုံ ကြည်မှုက ငြိမ်းချမ်းရေး တည် ဆောက်တဲ့နေရာမှာ တကယ့်ကို အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ် တယ်။
နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာ သဘောတူညီ ချက်တွေနည်းတာက ခွဲမထွက်ရ ကိစ္စကြောင့်လို့ပြောတယ်။ ခွဲမ ထွက်ရကိစ္စအပေါ် KNU ရဲ့အ မြင်သဘောကို ရှင်းပြပေးပါဦး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မူကတော့ နဂိုကတည်းက ခွဲထွက်ဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ စု ပေါင်းနေထိုင်ကြဖို့အတွက်ပဲ။ သို့ သော်လည်း ဒီစာသားမှာ ကျွန် တော်တို့ တခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ မှာကတော့ သိပ်ပြီးတော့ sensitive ဖြစ်တယ်နော်။ ဒါက ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ စကားလုံးအ ပေါ်မှာ (၁) အချက်ကတော့ ဒီခွဲ မထွက်ရေးဆိုတာက အခြေခံမူ မဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံရေးသဘောတူ ညီချက်ဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခု က နိုင်ငံရေးကတိက၀တ်အဖြစ်ဒါ က သီးသန့်ဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ် ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဖက်ဒရယ် အခြေခံမူထဲမှာ ခွဲမထွက်ရလို့၊ ခွဲ ထွက်တာတို့ဆိုတာလည်း လုံးဝမ ပါဘူး။ မဖြစ်သင့်ဘူး၊ အဲဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။
ဒီစိုးရိမ်ချက်ကို ဘယ်လိုကျော် လွှားသင့်ပါသလဲ။ သက်ဆိုင်ရာ ဘက်တွေကို ဘယ်လိုပြောလိုပါ သလဲ။
ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ မြင်တာပေါ့။ ပြည်ထောင်စုပြော ကတည်းက ပြည်ထောင်ခွဲမှ မ ဟုတ်တာ။ ပြည်ထောင်စုတည် ဆောက်တာပဲဟာ။ ဖက်ဒရယ် တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာ အဓိ ကက ကျွန်တော်တို့မြင်တာက ဖယ်ဒရယ် တည်ဆောက်တဲ့အ ပေါ်မှာ အစွဲအလမ်းပေါ့လေ။ ဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်က ဖက်ဒရယ်ဆို တဲ့စကားလုံး လုံးဝမသုံးရဘူး။ ဖက်ဒရယ်ဆိုတာက နောက်ဆုံး ကျတော့ ခွဲထွက်တာ၊ ပြိုကွဲတာ တဲ့။ အမှန်အားဖြင့် တကယ့်ရိုးရိုး ကိစ္စတစ်ခုပဲ။ မိသားစု တစ်စုအ တွင်းမှာတောင် မိဘဆိုတာရှိ တယ်။ သူတို့သားသမီးတွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် တွေပေးရတယ်။ အဲဒီလိုပါပဲ။ ဒါက ကိုယ့်ဒေသအတွင်းမှာ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ် ပိုင်ခွင့်တော့ရှိရမှာပေါ့။ ကျွန် တော်တို့မြင်တာကတော့ ပြည် ထောင်စုဆိုတာက ဗဟိုအစိုးရ ကအာဏာကိုခွဲဝေတာ။ အာဏာ ကို ပိုမိုပြီးတော့ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်အောက်ခြေအထိ သုံးနိုင်တဲ့ အာဏာခွဲဝေမှုလို့ ကျွန်တော်အဲ ဒီလိုနားလည်တယ်။ အခုဟာက စိုးရိမ်မှုနဲ့၊ မယုံကြည်မှုနဲ့၊ သံသ ယရှိမှုနဲ့ ကျွန်တော်တို့က ငြိမ်း ချမ်းရေးတည်ဆောက်နေတာ။
နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေတဲ့ ငြိမ်း ချမ်းရေးကို ခပ်မြန်မြန်သွားဖို့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့သွား သင့်သလဲ။
ခပ်မြန်မြန်လုပ်နိုင်ဖို့က တော့ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တွေ့ဆုံ မှု၊ ဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းတွေ အမြဲ တမ်းပုံမှန်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီး တော့ကောင်းမွန်မယ်။ ဘာဖြစ် လို့လဲဆိုတော့ တစ်ဖက်နဲ့တစ် ဖက် သဘောထားကို အမြင် ချင်းမတူတဲ့အပေါ်မှာ ဖလှယ်တာ တို့၊ ပုံမှန်တရားဝင်အစည်းအဝေး တို့၊ အလွတ်သဘောအစည်း အ ဝေးတို့ လုပ်ဖို့သင့်တယ်။ ရင်းရင်း နှီးနှီးပေါ့။ လေ့လာမှုက မတူဘူး လေ။ ပြီးတော့ သဘောတရား တွေသင်လာခဲ့တာလည်းမတူ ဘူးလေ။ တောထဲမှာသင်လာတဲ့ သဘောတရားနဲ့ မြို့ထဲမှာအစိုးရ သင်တာနဲ့၊ သောင်းကျန်းသူနဲ့၊ တစ်ဖက်က အာဏာရှင်နဲ့က တူ မှမတူတာ။ ဒီလိုပဲသဘောတရား သင်လာရတာ။ ကျွန်တော်တို့ လည်း အဲဒီလိုပဲအသင်ခံလာရတာ ပဲ။ ပညာပေးတာပဲ။
လက်မှတ် မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့ တွေအပေါ်ဘာများတိုက်တွန်း လိုပါသလဲ။
ကျွန်တော်တို့ NCA အပေါ် မှာ အတူတကွလက်မှတ်ရေးထိုး နိုင်ဖို့ဆိုတာက အပစ်အခတ်ရပ် စဲရေးလုပ်ငန်းကို ကျွန်တော်တို့ ဆက်ပြီးလုပ်မယ်။ အခြေခံနိုင်ငံ ရေးပြဿနာတွေကို ဆွေးနွေးနိုင် ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ဒါက ပိုမိုကောင်းမွန်တယ်။ နောက်ပြီး တော့ တိုင်းရင်းသားတွေက စုစု စည်းစည်းနဲ့ ဒီလမ်းကြောင်း အ ပေါ်လျှောက်နိုင်လို့ရှိရင် ပိုမို ကောင်းမွန်တယ်။ တိုင်းပြည်အ တွက်လည်းကောင်းတယ်။
Training on Democracy, Federalism and Peace
ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင်နှင့် NCA လက်မှတ်ထိုး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အ ဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ...
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချု ပ် ( NCA ) မှာ လက်မှတ်ထိုးဖို့ ကျန်ရှိနေတဲ့...
Copyright ©2019 Centre for Development and Ethnic Studies. All Rights Reserved. | Design and Developed By CDES & Pro-X.